Yakakura Fomati Printer, Embroidery Machine, Kucheka kuronga - YINGHE
Dhijitari Yakakura Fomati Printer
Laser Engrver Uye Cutter
Sublimation Heat Press muchina
Album Kugadzira Machine
Hofisi & Kurongedza Machine
YINGHE nhoroondo uye bhizinesi modhi: YINGHE ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD ndiyo chete supamaketi yemidziyo yezvipfuyo ine yepasi rese mhiri kwenzvimbo yekuchengetedza basa kuyambuka muganho e-commerce chikuva kambani. kambani yedu yakavambwa muna 2002, mushure memakore ekuvandudza, YINGHE rave rinozivikanwa rinozivikanwa mudzimba nekune dzimwe nyika zvigadzirwa zvepamusorosoro zvebhizimusi remazuva ano, chiyero chekambani, zvigadzirwa nemasevhisi munyika zviri zvechipiri kune. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanaka kune nyika dzinopfuura mazana maviri nematunhu epasi.
Sechinhu chepakati cheiyo inkjet yekudhinda muchina, kugadzikana kwemusoro wekudhinda zvisina kunangana kunoona mhando yemuchina. Kana iyo yakamisikidzwa mutengo yemusoro wekudhinda iri mudenga, maitiro ekuwedzera hupenyu hwebasa remusoro wekudhinda, kudzora mutengo wekutsiva uye degree rekupfeka, uye chengetedza musoro wedhinda nemazvo.
Ndeupi musiyano uripo pakati pemvura-base ...
Zvina zvakanakira piezoelectric inkjet s ...